China Fithem Ks-009SB Bluetooth na-agba chaa chaa na-enweghị mmiri na mmiri na ntụrụndụ ụlọ ekweisi na-emepụta na ndị na-eweta ya | Kaiwansi
Fithem Ks-009SBluetooth na-agba chaa chaa na-enweghị mmiri na ekweisi ụlọ ntụrụndụ
Mado na egwu mara mma mgbe ị na-emega ahụ nwere ike ime ka mmega ahụ ghara ịdị egwu. Họrọ eriri ekwe ntị Bluetooth wireless na-eme ka ị nwekwuo ntụsara ahụ, ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ndụ dị jụụ n'oge ezumike gị, ị nwere ike tufuo agbụ ahụ ma hapụ ọsụsọ gị n'obi. Isi egwuregwu na-atụ aro taa bụ KS-009s, nke mere na ndụ egwuregwu gị adịghị egwu.
1. Ihe a haziri maka ekweisi a dị ezigbo mma na ndị ọrụ, belụsọ maka nku azụ shark, nku ntị abụghị naanị ihe dị nro kamakwa ọ na-akpachi anya na imewe. Agaghị enwe ahụ iru ala ma ọlị na ntị. Ọ bụ ergonomic ma kwụsie ike iji eyi. N'iji ihe eji eme ka ihe sie ike, ọ gaghị ada n'ihi mmegharị, na ọkwa mmiri nke ihe ahụ bụ IPx5.
2. N'ihe banyere àgwà dị mma, a na-eji oghere igwe mee ka ohere dị na mbara igwe mepee emepe karị, mkpebi ahụ nwere ọtụtụ bass, obere oge dị ike.
3. streamzọ mgbapụ nke Bluetooth 5.0 nke kachasị dị elu na-eme ka njikọ ahụ dịkwuo ike, obere ike oriri, ahụmịhe, na ịge ntị na egwu.
4. Igwe nti nwere arụ ọrụ magnetik, yabụ agaghị enwe ọnya waya mgbe ekwentị anaghị eji ekwentị ntị.
5. Mbukota ibu ibu:
1 ibe / igbe
Ibe 40 / CTN
Nha katọn: 43 * 27 * 27.5 CM
NET ibu: 3.8 n'arọ
Gross arọ: 4,4 n'arọ
6. Ndụ batrị ogologo bụ awa iri na abụọ, ị naghị atụ egwu ịmetụta ọrụ ma ọ bụ ọnọdụ gị mgbe batrị na-adịghị ike mgbe ị nọ njem azụmahịa ma ọ bụ jiri ya arụ ọrụ!
Nke gara aga: Fithem Ks-816 Ikuku Bluetooth Bluetooth tws ekweisi ala-treble ekweisi nwere ike ahaziri logo
Osote: Fithem ks-011b waterproof music wireless Bluetooth n'olu nghọta gaminggba Cha Cha ekweisi
Fithem ks-016 Ikuku stereo neckband bluetoot ...